SI DEYN DEG-DEG AH ABRIIL 9, 2001
Dr. CABDI MAXAMED CULUSOW "BLACK" OO BIXIYAY WAR SAXAAFADEED
Mar ay teleefan isku xirteen (tele-conference) oo ku wada hadleen aqoonyahanka Mudulood ee dibedda ku nool ee ku sugan: Wqooyiga Ameerika, Yurub, Carabta iyo Afrika; waxayna soo saareen war saxafadeedkan: "Runti waxay noqotay wax lala yaabo oo aan munaasab ahayn, ama qof mas'uul ah inuu ka soo yeero, wax walaac siyaasadeedna keeni kara iyo colaad sokeeye oo dhex marto beela wada dhashay inuu Cali Khaliif Galleyr uu ku tilmaamo Muuse Suudi Yalaxoow inuu ka yimid seddex boqol oo kiiloometer meel Xamar u jirta", ayuu yiri Dr. Culusow.
"Marka hore Muuse Suudi Yalaxoow, wuxuu ku dhashay kuna bar-baaray Xamar, waana shaqsi Mudulood ah. Haddaba Cali Khaliif Galleyr waa ku qaldan yahay, waana siyaad gurracan, haddii uu doonayo inuu qilaaf ka dhex abuuro Beesha Mudulood; qaarna ka dhigo in ay marti ku yihiin Xamar, qaarna ka dhigo ineey leeyihiin, wax u meel maraayo ma aha. Maxaa yeelay Mudulood Xamar ma kala laha, cid walbo oo Soomaali ah oo nabad ineey kula noolato rabto waa lagu soo dhoweynaaya.
Mida kale Muuse Suudi Yalaxoow, wuxu ku ammaanan yahay inuu deganeyn xafiis dawladdeed, guri dad ay leeyihiin, inuu jidka isbaaro u oolin, wax argagaxiso ah uuna ku kicin, lacag aan jirin dalka soo gelin, heysanna hanti dad ay leeyihiin iyo inuu dhul dad ay leeyihiin dagaal u aadin, duulaanna ku qaadin.", ayuu yiri Dr. Culusow.
"Waan ka xunahay dhowaan afduubki lagu sameeyay shaqaalaha Samafalka iyo kooxdi ka socotay UN-ka oo ah wax ka baxsan bani'aadanimada oo marna raali laga noqon karin. Waxaan kale oo aad iyo aad uga xunahay dhimashadi iyo dhaawaci faraha badna ee soo gaaray beesha Mudulood ee dagaalamay iyo dhammaan dadki rayidka aha ee ku hoobtay, qaarna ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo ku ammaanan wax qaradki Mudulood oo damiyay colaadi sii faafi la hayd", ayuu yiri Dr. Culusow. "Haddaba, waxaa laga ma maarmaan ah in loo saaro Guddi Farsamo oo madax bannaan oo soo baara, sida ay wax u dhaceen, dhibaatada inta ay la ektahay iyo ciddi ka dambeeysay oo ku lug lahayd.
Maxaa yeelay, ma qabno Cali Khaliif Galleyr iyo xubnaha kale ee ka tirsan Dawladda KMG ah in ay runta ka sheegeen sidi ay wax u dhaceen ama kalinta ay kaga jireen dhibaatadi dhacday oo loo baa hanyahay in ay ogato Ummadda Soomaaliyeed", ayu yiyri Dr. Culusow.
Dr. Cabdi Maxamed Culusow "Black"